01 | May | 2018 | Danya Wadi
ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာအပေါ် တဘက်သတ် အကောင်းမမြင် ဖြစ်နေဟု ဆို
By danyawadi May 1, 2018 Leaveacomment
By ထက်နိုင်ဇော် 1 May 2018 မြန်မာအစိုးရ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ရခိုင်အရေး လေ့လာရန် ရောက်ရှိနေသည့် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ကိုယ်စား လှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာအပေါ် လုံးဝ အကောင်းမမြင်ဘဲ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရောက် မွတ်စလင်များ ပြဿနာနှင့် ပတ်သက် ၍ မြန်မာအစိုးရကိုသာ အပြစ်တင်နေကြောင်း ၎င်းအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတချို့က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ ယမန်နေ့ ညပိုင်းက နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေက ယင်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်ရှိ ရွှေစံအိမ်ဟိုတယ်၌ အလုပ်သဘော ညစာစားပွဲဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံ ၏စဉ် နှစ်ဖက် ဆွေးနွေးရာ၌ အဆင်မပြေမှု တချို့ရှိခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။ မြန်မာ အစိုးရအနေဖြင့် ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည် ခေါ်ယူရာတွင် […]
(မေလ ၁ ရက်နေ့ထုတ် The Daily Eleven သတင်းစာ၏ အယ်ဒီတာ့ အာဘေ်ာ) ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်ဒေသ တစ်လျှောက်၌ နေထိုင်နေကြသော ဘင်္ဂါလီ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်များထံသို့ ဧပြီ ၂၉ ရက်က သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင်း ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဒုက္ခသည်များကို မေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် အဆိုပါအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဆက်လက် သွားရောက်ပြီး အရပ်သား အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်သည်။ ယခု ရောက်လာသည့်အဖွဲ့၌ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ နိုင်ငံမှ သံတမန် ၂၆ ဦး ပါဝင်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ (UNSC) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီး အချို့နှင့် […]
01 မေ၊ 2018 ဗွီအိုအေ (မြန်မာပိုင်း) ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဖက် ထွက်ပြေးသွားရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ မြန်မာနိုင်ငံထဲ ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိပြန်လာပြီး ဘေးကင်းစွာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မြန်သွက်သွက်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို ကျကျ နန စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ သံတမန်အဖွဲ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကုလ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ကိုယ်စား ပီရူး၊ ပိုလန်၊ ကူဝိတ်နဲ့ ဗြိတိန်သံအမတ်တွေက နှစ်ရက်ကြာမြန်မာခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဒီနေ့ညနေပိုင်း နေပြည်တော်မှာ ခပ်တိုတို တုတ်တုတ် ပြုလုပ်ပြောဆိုသွားတာပါ။ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်နို်င်ရေးကိစ္စကို အလေးပေး ပြောခဲ့ကြသလို၊ အခု ခရီးစဉ်ဟာ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကို အကူအညီပေးဖို့ လာရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း အသေအချာ ထပ်မံ ပြောဆိုပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးမှာ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းစံထားအတိုင်းဖြစ်ဖို့သလို၊ NVC […]
Mu’ meneen Brothers and Sisters, As Salaam Aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. (May Allah’s Peace, Mercy and Blessings be upon all of you) One of our brothers/sisters has asked this question: Ok then. Here is my proof. You claim that the prophet (SAW) did not celebrate shab-e-baraat because it is not written in the authentic […]
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေး အဖြေရှာသွားမှာ ဖြစ် ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် သံတမန်တွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာမယ့် သူတို့ခရီးစဉ်မှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံကို ဆက်ပြီးပြောပြမှာပါ။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် သံအမတ် ၁၅ ဦးလုံးလိုက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှခရီးစဉ်အတွင်း no man’s land မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနယ်စပ်မျဉ်းနေရာအပါအ၀င်Cox’s Bazar ရှိ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အခြေအနေကို မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့က ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း သံအမတ်အသီးသီးက ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကနေ့ […]
28 minutes ago NAYPYITAW, Myanmar (AP) — Members ofaU.N. Security Council team probing Myanmar’s crisis over its ethnic Rohingya Muslim minority arrived in the country’s capital on Monday afteravisit to Bangladesh, where about 700,000 Rohingya who fled military-led violence live in refugee camps. The U.N. delegation will meet Myanmar’s top leader, […]
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်နိုင်ရေး ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှာ ဆွေးနွေး အဖြေရှာသွားမှာ ဖြစ် ကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ် ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ကိုယ်တိုင်သွား ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင် သံတမန်တွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာမယ့် သူတို့ခရီးစဉ်မှာလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ရိုဟင်ဂျာတွေ ရဲ့ အခြေအနေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မအင်ကြင်းနိုင်က အပြည့်အစုံကို ဆက်ပြီးပြောပြမှာပါ။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင် သံအမတ် ၁၅ ဦးလုံးလိုက်ပါလာတဲ့အဖွဲ့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ခရီးစဉ်အတွင်း no man’s land မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေရ်ှနယ်စပ်မျဉ်းနေရာအပါအ၀င်Cox’s Bazar ရှိ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတွေ၊ ကလေးငယ်တွေအပါအ၀င် တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ လည်း တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေ ရဲ့ အခြေအနေကို မနေ့တနင်္ဂနွေနေ့က […]